Top Atụmatụ N'ihi ejegharị With Your Anu ulo | Save A Train
Home > Travel Europe > Top Atụmatụ N'ihi ejegharị With Your Anu ulo
Oge Ọgụgụ: 5 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 28/03/2021)
Ndị a Top Atụmatụ maka njem na gị anu ulo ga-enyere gị belata nchegbu. N'ihi na ka ihu ya, ejegharị ejegharị na gị anu ulo bụ nrụgide! Ma ihe bụ ihe ọzọ na-akpata nchekasị, bụ echiche nke ịhapụ gị anụmanụ n'ụlọ ma ọ bụ na nlekọta nke ndị ọzọ. O doro anya, ọ dịghị onye na-elekọta ha otú ị na-eme! Right?
E nwere ọtụtụ nhọrọ maka ihe na-eme mgbe ị na-ejegharị ejegharị n'ụlọ. Dog hotels, iwere onye na-elekọta ụlọ, ma ọ bụ nyefee ibu ahụ, albeit a cute otu, enyi gị nwere n'etiti ndị nhọrọ. Ndị a bụ ihe ndị kasị nkịtị na ndị mmadụ na-amalite. Otú ọ dị, mgbe ụfọdụ na e nweghị ndị ọzọ nhọrọ na i nwere na-eme njem na gị Pita. Ezie na ọ pụrụ ịbụ nnọọ a siri usoro, Save A Train nwere ụfọdụ n'elu Atụmatụ ga-enyere gị mgbe ị na-ejegharị ejegharị na anu ulo!
Pet Atụmatụ 1: Weta A Na-emeso!
Ejegharị ejegharị na-a ebe ọhụrụ pụrụ ma eleghị anya ga-nrụgide gị Pita. Ya mere na-eme ka n'aka na ọ na-anọgide ka ala dị ka o kwere bụ isi ihe na a ala na njem maka onye ọ bụla aka. Weta ya ma ọ bụ ya mgbe ụmụaka ji egwuri egwu, blanket, na ihe ndi ozo nke nwere ike ime ka nkita gi ma obu pusi gi di nma. Ha obi ma ghara ime ihe ọ bụla na-ezighị ezi? Jide n'aka na ị kwụọ ha ụgwọ ọrụ na-eme ka njem na anu ulo ihe ọma na-eme n'ọdịnihu.
Pet Atụmatụ 2: ma Ọ bụghị oke ọtụtụ na-emeso…
M na-eche dị ka a doro anya, ma m ga-asụpe ya maka na ị na agbanyeghị! Enyela ha a arọ nri ma ọ bụ ka ha na-aṅụ nke ukwuu mmiri nke mere na gị Pita agaghị nwere agụụ ka dochie onwe ya na ihe ihere ntụpọ! (Anyị aka ná ntị na-ejegharị ejegharị na gị anu ulo pụrụ ịbụ tricky!)
Pet Atụmatụ 3: Mgbatị
Ma na-amasị ya ma ọ bụ, ndị a Top Atụmatụ maka njem na gị anu ulo pụtara na ị na-agbarapụ ime ụfọdụ ụdị mmega! Dị nnọọ tupu ị malite njem, -ha, n'ihi na ụfọdụ mmega ahụ siri ike! N'ihi na nke mmezi-ogologo ije ma ọ bụ na onye na-ufiop playtime na gị hụrụ n'anya N'ụbọchị nke abụọ enyi, ọ pụrụ ịbụ nnọọ ihe na ike gwụrụ ka nchegbu banyere ihe. ma ọ bụrụ na ị nwetara a cat na ọ bụghị otú ụtọ nke a na-weere a ọsọ, agbalị na-akpali ha ime. Ihe eji egwuri egwu na-eme mgbanwe nwere ike ibute n'ụdị mops ihe atụ! Tụkwasa m obi… M nwere ahụmahụ na-ejegharị ejegharị na anu ulo!
Pet Atụmatụ 4: Research Embassy Chọrọ
Mba dị iche iche nwere dị iche iche a chọrọ. Ọtụtụ mba na-achọ kwarantaini oge, ma ọ bụrụ na ị chọrọ na-eji oge na-eme njem na gị anu ulo, jide n'aka na ị abụọ-elele a! Ọtụtụ mba na-achọ gbaa maka oria nkita, bordetella (ulo nkita ụkwara), na parvo. Kpọọ ihe ọrụ nnọchite anya obodo na ime gị research online ịhụ ihe na mba chọrọ, na-eme ka n'aka na ka gị na-ede n'akwụkwọ kemfe mgbe agafe ókè.
You nwere ike nyocha njem na anụ ụlọ na mba chọrọ na PetTravel.com.
5. Nweta A Health Certificate
Health asambodo na-achọrọ site ụgbọ elu, ókè-ala ọchịchị, hotels, Pita na-elekọta emmepe, na ndị ọzọ mgbe ejegharị ejegharị na gị anu ulo. N'ọtụtụ ọnọdụ, mgbe ejegharị ejegharị na anu ulo ị chọrọ iji nweta ahụ ike gị akwụkwọ n'ime 10 ụbọchị nke na-amalite gị njem. Nchọnchọ kpọmkwem chọrọ nke gị njegasi n'ihu na ịga na pụọ, ya mere, ha nwere ike na-agụnye ihe niile dị mkpa na akwụkwọ.
6. Nọgidenụ na-An Electronic Copy Of Your Pet si Health Certificate
ọtụtụ hotels, njem rụọ, ịzụ elekọta emmepe, ụgbọ elu, na omenala na mbata na ọpụpụ ụlọ ọrụ na-achọ a biri ebi ndekọ nke gị Pita ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ akwụkwọ. Kama ibi akwụkwọ anya reams nke mbipụta ọ bụla o kwere omume atụ, ibipụta anya a di na nwunye na na-na otu kọmputa oyiri mgbe ejegharị ejegharị na anu ulo.
Myscha Theriault bụ a kasị mma-ere na-ede akwụkwọ na mba-syndicated njem columnist na-ejegharị na-oge ya sayensị nta akụkọ di na ibu Labrador retriever. Na ya electronic oyiri kemfe, ọ bụ ịdị njikere mgbe niile na-emepụta ya nkịta ahụ ike asambodo dị ka mkpa.
“The hotel azụmahịa center ngwa nbipute ahapụ m ka m na-ebipụta a PDF akwụkwọ nke anyị Labrador si shot ndia ka chọrọ, n'ihi na ihe atụ, mgbe ọ bụla anyị mkpa ka akwụkwọ otu ehihie nke daycare maka ya si ụzọ. Ọ na-eme ka akwụkwọ ahụ tụkọtara ala kwa ụbọchị, mgbe fọdụrụ kwadebere maka ikpeazụ-nkeji mgbanwe oge anyị.”
Reggio Emilia na Florence Ụgbọ oloko
7. Research Obodo Vets
Dị nnọọ bụrụ na ihe na-eme n'okporo ụzọ, ị na-achọghị na-scrambling chọta a reputable pụọ. Dekọọ ozi kọntaktị ole na ole vets na ebe ị na-eleta tupu ị malite njem na anu ulo.
Genoa na Venice Ụgbọ oloko
Turin ka Venice Ụgbọ oloko
Parma na Venice Ụgbọ oloko
La Spezia na Venice Ụgbọ oloko
Anyị na-atụ ndị a Top Atụmatụ maka njem na gị anu ulo na-enwe ebelatala gị iwe a bit! Ka anyị mara ma ọ bụrụ na i nwere ihe ọ bụla ọzọ n'elu Atụmatụ ịkọrọ Save A Train na anyị obodo. Anyị ga-amasị anụ gị!
Ị chọrọ Embed anyị blog post “Top Atụmatụ N'ihi ejegharị With Your Anu ulo” na na gị na saịtị? ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftips-traveling-with-your-pets%2F%3Flang%3Dig- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
#animallover #anụmanụ #nwamba #nkịta #anu ulo #pettips #travelingpets #travelwithpets europetravel trainjourney
Olee otú Iji Enwe Holland Tulip Season
Train Travel Austria, Inzọ Njem Italytali, Travel Europe